Home AKWỤKWỌ NKE CLASSIC Ricardo Kaka Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; "Kaka". Ricardo Kaka Ụmụaka Akụkọ ya na akụkọ na-adịghị mma akụkọ Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe ọ na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ma ole na ole tụlee Ricardo Kaka Biography bụ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Ricardo Kaka Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ndụ mbido
Ricardo Izecson dos Santos Leite AKA 'Kaka' mụrụ na 22nd ụbọchị nke April 1982 na Brasília, Federal District, Brazil.
A mụrụ ya nne ya, Simone dos Santos (onye bụbu onye nkụzi ụlọ akwụkwọ elementrị) na Bosco Izecson Pereira Leite (onye na-enyocha ụlọ ọrụ ndị ọrụ ezumike nká).
Ọ na-enweta nkwado ego nke na-enye ya ohere ilekwasị anya na ụlọ akwụkwọ na football n'otu oge ahụ. Mgbe ọ dị afọ asaa, ezinụlọ Kaká kwagara São Paulo.
Dị ka ọtụtụ ndị nọ n'ihu ya, Kaka hụrụ na bọlbụ egwuregwu ọ hụrụ n'anya. Ụlọ akwụkwọ ya chọtara talent ya ma mee ya n'usoro ụlọ ọrụ ntorobịa a na-akpọ "Alphaville,".
Oge Ricardo Kaka Boyhood
Kaka mere ka ụlọ klas ya ruru eru maka akpatre n'ime mgbampi ha. Nke a mere ka ọ gụkwuo ya na ụlọ ndị obodo São Paulo FC, bụ onye nyere ya ebe na agụmakwụkwọ ndị ntorobịa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ricardo Kaka Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Kaka zutere Caroline mgbe ọ dị obere mgbe ọ bụ 15 ọ bụ 20 n'oge ahụ.
Nke a mere na 2002, mgbe ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ Brazil. Ha dara ibe ha n'anya. Ọbụna anya (na ọtụtụ puku kilomita) enweghị ike ikewapụ ha. Ha abụọ malitere mmekọrịta siri ike na oge Kaká na-adịghị egwu egwu AC Milan. Mgbe ọ na-aga, Celico sonyeere chọọchị Kaka Brazil ma emesia ghọọ onye pastọ, ha nile n'ekele okwukwe nke enyi nwoke ya nwoke.
N'ezie, Caroline mara ezigbo mma, onye kwesiri ntukwasi obi na Onye Kraịst nwere obi ebere. Kaka ama ama ama ọdọhọ ke mmọ iba ẹkedi nditọiban ke mbemiso enye okoyomde enye.
Ha lụrụ na 23rd nke Disemba 2005 n'ọmụmụ ihe a na-akpọ Rebirth na Christ na São Paulo.
Foto Ịgba Ọhịa
Di na nwunye ahụ nwere ụmụ abụọ: nwa Luca Celico Leite (nke a mụrụ 10 June 2008) na nwa Isabella (a mụrụ 23 April 2011). Ha abụọ dị nnọọ nso nna ha dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a.
Kaka na ụmụ ya
Ricardo Kaka Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ịgba Alụkwaghịm Akụkọ
Na 2015, Kaká na Celico mara ọkwa ịgba alụkwaghịm site na mgbasa ozi mgbasa ozi. N'okwu ya ..."Anyị ga-achọ ime ka ọha na eze mara na, mgbe afọ itoolu gasịrị, anyị kwetara ịgba alụkwaghịm. Alụmdi na nwunye anyị enyewo anyị ụmụ mara mma abụọ anyị hụrụ n'anya nke ukwuu. N'ihi ihe dị mkpa njikọ, anyị ga-anọgide na-enwe, nkwanye ùgwù, ekele, na mmasị maka ibe anyị na-anọgide kpamkpam. Anyị na-arịọ maka ọmịiko na nghọta gị iji chebe onwe anyị n'oge mgbanwe dị otú ahụ. "
Ya Ex-nwunye Celico gosipụtara ... "Mgbe nwoke na-aghọ aghụghọ, ọ bụ ihe ịrịba ama na nwunye ya dara." Okwu ya nyere ndị Kaka aka ịmata ihe kpatara ịgba alụkwaghịm na ihe mere ha ji gbaa alụkwaghịm.
Ihe Caroline ghọtara banyere ịgba alụkwaghịm ya
Na 24 December 2016, Kaka kwadoro na ọ na-akpakọrịta nlereanya Brazil nke bụ Carolina Dias na ozi ya na ụmụazụ 9.8million na Instagram.
Ihe akaebe na Kaka kwadoro
Ndị abụọ ahụ gara agbamakwụkwọ Lucas Moura na Sao Paulo.
Nakwa na njedebe nke 2016 mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, Caroline Celico kwetara na ya na onye ahịa azụmahịa nke Brazil bụ Eduardo Scarpa dị ugbu a. Obi dị Kaka mma mgbe ọ hụrụ foto nke nwunye ya mbụ na nọmba onye iro ọ nwere. Eduardo yiri ka ọ na-elekọta nnọọ ịhụnanya ọhụrụ ya.
Ihe àmà na-egosi na Caroline Celico gara n'ihu
Ricardo Kaka Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
NME: Nna Kaka, Bosco Izecson Pereira Leite bụ onye ọrụ ezumike nká ezumike nká nke ezinụlọ dị n'etiti. O jidere na umu ya nwoke abuo (Kaka na Digão) nwetara ezi ozo. Ha abughi ka a zụlitere ha na ịda ogbenye. O nyere ha ohere ziri ezi na ohere ịhọrọ na ibi ndụ nrọ ha. N'okpuru ebe a bụ Bosco Izecson Pereira Leite na ọkpara ya, bụ Little Kaka.
Bosco Izecson Pereira Leite na obere Kaka
Nne: Kaka's mum; Simone dos Santos bụ onye nkụzi nke ụlọ akwụkwọ elementrị lara ezumike nká bụ onye wuru mmekọrịta dị mma n'etiti ya, Kaka na ndị ezinụlọ ya. Ịbụ onye nkụzi ụlọ akwụkwọ elementrị mere ka ọ ghọtakwuo ọnọdụ ndị ezinụlọ ya. Simone dos Santos nọ n'azụ Kaka ịbịaru Chineke nso. Ha abụọ dị nnọọ ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Kaka na Mum- Simone dos Santos
NNE: Rodrigo Manuel Izecson dos Santos Leite (nke a mụrụ 14 October 1985), nke a maara dị ka Digão, bụ Brazil ndị ọkachamara na ezumike nká ezumike nká na nanị nwanne Kaka. Ọ na-egwuri egwu dị ka onye na-eche nche n'etiti ya n'oge ọrụ ya.
As Ndị Bleachers Report tinye ya, Digão bụ otu n'ime ndị na-ahụ maka football football-10 kachasị n'ụwa nke na-emeghị ya na ọrụ ha. Digão na-egwu maka AC Milan ruo otu afọ tupu ya alaghachi na kọntinent America iji nọgide n'ọrụ ya nke dara.
Ruo oge, a na-ewere ya dị ka onye kasị njọ na-egwu egwu mgbe ọ bụla ọ gafere ụkwụ na Serie A. Ụfọdụ Fans na-ekwu na ọ bụ ya kpọmkwem (nke antonym) nke Kaka n'ụzọ ọ bụla o kwere mee. Na-awụ akpata oyi n'ahụ, Digão na-egwu nanị 38 egwuregwu na ọrụ ya niile n'enweghị isi ihe mgbaru ọsọ. Ọ lara ezumike nká mgbe ọ dị obere na 32 ịhụ na bọl abụghị ọkpụkpọ ya.
Ihe furu efu na oru ya nwetara na ndu ndu ya. Ọ na-enwe obi ụtọ lụrụ di na nwunye Rebecca Sabino. Kaká bụ nna nna nke agbamakwụkwọ ahụ.
Ricardo Kaka Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ọdọ Mmiri Ọdọ Mmiri
Mgbe ọ dị afọ 18, Kaká tara ahụhụ na-eyi egwu na ikekwe ịrịa ọrịa-ịmalite ịkpụkpụ ụbụrụ na-akpata ihe mberede nke ọdọ mmiri.
N'ụzọ dị mma, ọ gbakere kpamkpam. Ọ na-ekwu na ọ gbakere nye Chineke, ebe ọ bụ na ọ na-akwụ ụgwọ ego ya na chọọchị ya.
Ricardo Kaka Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Amalite aha aha
Nwa nwanne ya nwoke bụ Rodrigo (onye a maara dị ka Digão) na nwanne nna ya bụ Eduardo Delani bụkwa ndị na-aga ụkwụ na ụzụ.
Digão kpọrọ ya "Caca" n'ihi enweghị ike ikwupụta ya "Ricardo" mgbe ha bụ ụmụaka. Enweghi ike ikwu okwu mechara ghọọ aha 'Kaká '. Aha 'Kaka' enweghị nsụgharị Portuguese kpọmkwem.
N'okpuru ebe a bụ foto nke Kaka na nwanne ya nwoke mgbe ha bụ ụmụaka.
Little Kaka na Digão
Ricardo Kaka Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Okwukwe Ya
Kaká bụ Onye Kraịst na-ezisa ozi ọma bụ Onye Kraịst na-arụsi ọrụ ike na São Paulo dabeere na Chọọchị Kraịst.
Ọ malitere inwe mmasị n'okpukpe mgbe ọ dị afọ 12: "Amụtara m na ọ bụ okwukwe na-ekpebi ma ihe ga-eme ma ọ bụ na ọ gaghị eme." ka Kaka kwuru.
A maara ya na ọ na-ewepụkarị ya na-egosi ya "Abụ m Jizọs T-uwe elu. Kaka ejirila aka na-ekpe ekpere mgbe oge ikiri ikpeazụ nke egwuregwu. Nke a ka o mere mgbe 2002 World Cup na Brazil, Milan 2004 Scudetto na 2007 Champions League meriri.
N'oge ememe egwuregwu na-eso 4-1 nke Brazil merie Argentina 2005 Confederations Cup N'ikpeazụ, ya na ọtụtụ n'ime ndị òtù ya yi uwe T-agụ na-agụ "Jizọs Hụrụ Gị n'Anya" n'asụsụ dị iche iche.
Mgbe ọ na-anata FIFA World Footballer nke Year award na 2007, ọ sịrị mgbe ọ bụ nwata na ọ chọrọ nanị ịbụ onye ọrụ ọkpọọ maka São Paulo ma kpọọ otu egwuregwu maka Brazil otu mba, mana nke ahụ "Chineke nyere [ya] karịa ihe ọ rịọrọ."
Ruo ụbọchị, ụdị egwu kachasị amasị Kaká bụ ozi ọma na akwụkwọ ọ kachasị amasị ya bụ Bible. N'ajụjụ ọnụ na Brazil telivishọn O Globo, Kaka gosipụtara ọchịchọ ahụ ịghọ onye pastọ ozioma mgbe ezumike nká.
Ricardo Kaka Child Story Plus Ebube Ihe Ntughari Eziokwu -Ihe a na-echeta ya
Maka mgbapụ na-agbachitere ya.
Maka mmerụ ahụ, ọ tara ahụhụ na Real Madrid.
Maka ngwa ngwa, ike, arụ ọrụ na ịrụsi ọrụ ike.
Maka ịbụ onye ọkpụkpọ egwuregwu nwere ike iji ọsọ ọsọ, ụkwụ dị mma, na njikwa dị mma.
N'ihi ike o nwere iji dribble pasters.
Maka ịghọ onye ndu nke nduzi na imepụta ohere.
Maka ịbụ ugwo ziri ezi.
N'ihi ịbụ onye na-arụ ọrụ miri emi na-egwu egwu nke etiti.
Anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!
Ulo oru Europe333
Nwere ike 1, 2017